KDEN dia nohavaozina amin'ny kinova 1.4, nitondra fanovana lehibe sasany teo amin'ny seranam-piaramanidina.
Maha-iray MSFS fandefasana addon, nandalo fanaintainana nitombo niaraka tamin'ny simulator vaovao i KDEN. Ny fanamby lehibe indrindra dia ny fampidirana ireo tany goavambe amin'ny seranam-piaramanidina ho ao anaty sim. Amin'ny fanombohana, MSFS Ny SDK's SDK dia tena voafetra raha ny fahaizan'ny terraforming. Niafara tamin'ny làlan'ny taxibe marobe izany ary na dia ny lalana mihazakazaka aza dia somary mideza .. ary misy zotram-pizahana sasany manana sisiny sarotra.
Nanomboka teo, fanavaozana SDK vaovao maro no novolavolaina ary ny seranam-piaramanidina izao dia milamina kokoa noho ny fanaovana taxi, ny fiaingana ary ny fitsangatsanganana an-tanety. Betsaka koa ny fanatsarana hafa, toy ny faritra kendrena sasany hahazo sary manokana ortho ary mifangaro tsara kokoa amin'ny maodely.
Fanavaozana manan-danja ny rafitra terrain, fanamboarana mba hanamafisana ireo vongan-tany sy ireo olana isan-karazany amin'ny taxiway
Sary manokana ortho ho fampifangaroana tsara kokoa
Nanampy zavatra namboarina isan-karazany amin'ny perimeter airport
Fanamboarana maro ny maodely sy ny firafitra ho an'ny maso nihatsara
Terrain raikitra ho an'ny tunneling làlana
Navaid manokana an'ny ILS